Iindaba -I-1,000th ye-XCMG yokugoba umkhombandlela ojikeleze umgca wokudibanisa kwi-2019 kunye nomsitho wokuphehlelelwa ngobuninzi beetoni ezinkulu zokomba ezi-tonnage
Umsitho wokuphehlelelwa kwe-1,000th XCMG ethe tyaba yomkhombe wokugoba ngo-2019 kunye nokuqaliswa kobunzima beetoni ezinkulu zokugaya izixhobo ezithe tyaba zibanjelwe eXCMG Foundation! Kwintsimi yoomatshini abangenanto, ishiye istrowuku esomeleleyo nesimibalabala!
Iminyaka elishumi yokusebenza nzima kunye nokuqhubela phambili ukwenza umlinganiso wecandelo
Njengenkampani encedisayo yeXCMG Group egxile koomatshini abangenanto, iXCMG Foundation yasekwa ngo-2010 kwaye ingene kunyaka wayo weshumi wophuhliso kulo nyaka. Ukujonga emva kwimbali yeminyaka elishumi, ingeniso ikhule ukusuka kwi-yuan eyi-230 yezigidi ekuqaleni kokusekwa kwayo ukuya kwi-5.3 yezigidigidi ze-yuan ngo-2018. Ngeli xesha, isixhobo sokugrumba esithe tyaba, njengeyona ntsika iphambili, bekusoloko uphuhliso oluphambili kunye nokulima kwe-XCMG yentsimi engenamanzi. Kwisitya.
Ngapha koko, i-XCMG ibibandakanyeke ngokunzulu kumhlaba ongenamanzi iminyaka emininzi!
Kwangoko ngo-2002, i-XCMG yayisele iqhubekile kwaye isungule ngobuchule i-ZD1245 yokuqala ngokuzenzekelayo ekrelekrele ethe tyaba yomkhombandlela wokugumba ngamalungelo epropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda eTshayina, isaphula ipateni yokubhabha okushushu okuphezulu okuthe tyaba kuxhomekeke ekungenisweni kwelinye ilizwe.
Ngo-2006, emva kweminyaka emi-5 yoqokelelo lobuchwephesha, i-XCMG ethe tyaba yemigca yokomba imigqomo yaqala indlela entsha yokwenziwa kwendawo kwaye yaqala indlela yemveliso yobungcali.
Ngo-2009, i-R & D kunye nokuthengiswa XCMG ezinkulu-tonnage kusombiwa rigs banikezela abasebenzisi ezikumgangatho ophezulu kunye nokuthembeka ophezulu wokugrumba rigs. Ngokukodwa, uphuhliso lwetekhnoloji yokwakha yeerigs ezinkulu zokomba izixhobo zikhuthaze ukuphuculwa okungaphezulu komgangatho wemveliso.
Ngo-2010, i-XCMG ithathe “iProjekti yokuRhola iR & D kunye neProjekhthi yezoShishino” kwiPhondo laseJiangsu, kuphawula ukuphuculwa koomatshini abangahambelaniyo iXCMG sele ingene kwinqanaba elitsha.
Ngo-2012, XCMG tyaba zemiyalelo zokomba kwimarike yasekhaya ziye zafezekisa imveliso-phambili imveliso, ukuthengisa, kunye neentengiso, simo kuqala kushishino.
Ngo-2013, i-XCMG yenzelwe kwaye yasungula umgca wokuveliswa kwemveliso yokubhola, kwaye yavelisa indawo yokuqala yokumba izinto ezingezizo zokombiwa kwendlela yokulinganisa yokulinganisa, eyagcwalisa umsantsa kwicandelo lokuvavanywa kovavanyo lokuvavanywa kwasekhaya kunye nokuvavanywa, kwaye ke unonyaka Ukuveliswa kweeseti ezingama-2 000 Umthamo wemveliso yokomba ongajoliswanga. …
Ngo-2018, XCMG Foundation kuphuhliswe ngempumelelo tonnage inkulu tyaba zemiyalelo yokomba rig XZ13600, leyo ngempumelelo waqhekeza iiteknoloji ezingundoqo ezingundoqo ezifana ezinkulu-isikali zemiyalelo zokomba zokomba kulawulo umthwalo entsonkothileyo, yaye yamkela inkqubo yolawulo ezikrelekrele seemodyuli ukusombulula ingxaki Ukuhamba ngendlela entsonkothileyo, iidayimitha ezinkulu, kunye nokuhamba imigama emide. Ingxaki yokwakha ibeyimodeli entsha eluhlaza, ukhuselo lokusingqongileyo, ukhuseleko kunye nolwakhiwo olufanelekileyo.
"Ngenkxaso kunye noncedo lwabathengi nabahlobo bethu, i-XCMG yokuqhuba ngokuthe ngqo iyaqhubeka ukubeka kwinqanaba lokuqala kwishishini ukusukela ngo-2012, kwaye ngoku sinesabelo sentengiso esimalunga ne-50%. Kunyaka ophelileyo, baphumelela ukuthengisa rhoqo ngonyaka iiseti ze-1,500. Iimveliso zithunyelwe kumazwe angaphezulu kwama-70 nakwimimandla ”. UZhang Zhonghai, usekela mphathi jikelele weXCMG Foundation, uthe kwintetho yakhe ukuba kulo nyaka iXCMG Foundation izakuzama ukufezekisa imveliso kunye nentengiso ekujoliswe kuyo yeeseti ezingama-2 000. Kwangelo xesha, iya kuphucula ngamandla imveliso kunye nokuthembeka, ukufezekisa ukuphuculwa kwemveliso ekrelekrele, kunye nokubonelela abathengi ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu ngamaxabiso afanelekileyo. Iseti epheleleyo yezixhobo zokwakha. ”
I-1000th XCMG ethe tyaba yesikhokelo sokugrumba sigubungela umgca wendibano ngo-2019
XCMG ezisisiseko enkulu-tonnage oxwesileyo zemiyalelo yokomba rig iqala kwiibhetshi
Umzi mveliso ukwinto ephezulu, ukubamba ngesandla ukuze ube yeyona nto ibalaseleyo
Kumsitho wokuphehlelelwa ngobuninzi, i-XZ13600 ye-tonnage enkulu enkulu ethe tyaba yesikhokelo sokugrumba esisungulwe yi-XCMG ekupheleni kuka-2018 bekukho kuluhlu. Umthengi wakhe waqalisa uhambo lwentsebenziswano neXCMG Foundation kwangoko ngo-2013. Kule minyaka isixhenxe idlulileyo, uthenge ngokulandelelana izixhobo ze-XCMG ezingaphezu kweetoni ezingama-200, kwaye uhleli ngokuqinileyo njengomthengi we-XCMG's tonnage inkulu ye-directional drilling rig .
XCMG XZ13600 super enkulu tonnage tyaba zemiyalelo kusombiwa rig wazisa
Kumsitho wokuphehlelelwa, uMnu. Yang waseTianjin, othanda ukufumana isitshixo segolide, uthe uyakholelwa ukuba phantsi kwesiqinisekiso senkqubo ye-R & D ye-XCMG kunye neekhonsepthi zoyilo, XZ13600 iya kuba nakho ukugcina uzinzo lomgangatho kwaye kwakhona khokelela kumzi mveliso ongenamjelo wokuqhubela phambili.
UMnu Yang waseTianjin uthetha njengommeli womsebenzisi
Ukongeza kubathengi baseTianjin, kukwakho nabathengi abaninzi kwisiza abathanda ukukhankanya i-XCMG's tonnage enkulu ethe tyaba. Iimodeli zisukela kwiitoni ezingama-360 ukuya kwi-1,360 yeetoni, enexabiso elipheleleyo elingaphezulu kwe-60 yezigidi ze-yuan. Ngokudibeneyo, baye baphumelela ngokudibeneyo ukuphehlelelwa kwebhetshi yeetoni ezinkulu zokurhola izixhobo zokwenza imveliso kwishishini elingenamanzi. "Umyalelo wokuqala omkhulu."
"Oku kubonisa ngokupheleleyo amandla olomeleleyo XCMG kaThixo amashishini phambili, kwaye ibonisa impembelelo ngamazwe kunye nokhuphiswano olomeleleyo brand XCMG kaThixo." Kule mpumelelo, i-China Petroleum Pipeline Bureau of General Advisory Committee kunye ne China Petroleum Construction Association i-Trenchless Technology Unobhala-jikelele wekomiti yobungcali kunye nenjineli ephezulu kwinqanaba u-Xuli uthethe kakhulu ngayo.
UNobhala-Jikelele weKomiti yeTekhnoloji yeTrenchless yeChina China Petroleum Construction Association
Xa ethetha ngemeko yentengiso yangoku kwishishini elingenamanzi, uNobhala-Jikelele uthe ulwakhiwo lwasekhaya olungenamanzi lusekwizigaba zokuqala zophuhliso, kwaye ubude bokwakha bungaphezulu kweekhilomitha ezili-100,000. Ukujonga kwikamva, njengoko ulwakhiwo olungenamjelo lungena nzulu kolwesibini I "capillaries" kwizixeko ezikwinqanaba lesithathu zinethemba elilindelekileyo ukuya kuthi ga kwisigidi seekhilomitha sendawo yentengiso.
Eli lishishini elinyukayo nelikhulayo. Njengenkampani ekhokelayo kushishino olungenamjelo, ndiyathemba ukuba iXCMG ingalixhakamfula eli thuba kwaye ikhokele uphuhliso oluzinzileyo nolusempilweni lweshishini, ukuze ilizwe lam libe lilizwe elinomatshini ongenamanzi ovela kwilizwe elikhulu kumatshini ongenamkhondo! "